Nepal Correspondent, Author at AIM Khabar
गृह पृष्ठ > Articles Posted by Nepal Correspondent
Author: Nepal Correspondent
समाजसेवी, ब्यबसायी तथा कराते खेलाडी राजु ध्वज कार्कीको निधनः
May 20, 2021 May 21, 2021 Nepal Correspondent549
एमखवर नेपाल सम्वाददाता । २० मे, २०२१ । ललितपुर । गोदावरी नगरपालिका वडा नं १ गोदामचौर निवासी राजु ध्वज कार्कीको कोरोना संक्रमण बाट गत साता बि.सं. २०७८ साल बैशाख ३० गते (१३ मे, २०२१) मा निधन भएको छ । स्व. कार्की सितेरियो करातेका तेस्रो डान ब्ल्याकबेल्ट राष्ट्रिय खेलाडि हुन् । खेलकुदको अलावा आफ्नो ब्यबसाय गर्दै […]
April 6, 2021 April 6, 2021 Nepal Correspondent81
एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहले बागमती प्रदेश समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति असन्तुष्ट बन्दै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको खनाल–नेपाल समूहले अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा १७५ सदस्यीय समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको हो । जसको सहसंयोजकमा केदार न्यौपाने, अरुण न्यौपाने र पशुपति चौलागाई रहेका छन् भने सदस्यमा सदस्यमा पेम्बा तामाङ, टोपबहादुर वाइबा, […]
March 10, 2021 March 13, 2021 Nepal Correspondent218
अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा यात्रुको दुर्व्यवहार भोगेका नेपाली उबर ड्राइभर शुभाकर खड्कालाई सहयोग उठाउन थालिएको छ। गोफन्डमी डट ‌ओआरजी मार्फत् उनका लागि सहयोग उठाउन थालिएको हो।* खड्का अहिले पनि तनाव डरमा रहेकाले उनी काममा फर्किन नसक्ने भएकाले सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। उनका लागि २० हजार अमेरिकी डलर उठाउने अभियान चलेको थियो। बुधबार बिहानसम्म २३ हजार डलरभन्दा बढी रकम […]
February 22, 2021 February 22, 2021 Nepal Correspondent133
दरबार ह ,त्या का ण्डका मुख्य पात्र युवराज दीपेन्द्र शाह बहुप्रतिभाशाली थिए । उनी लोकगीत गाउन खप्पिस थिए । विभिन्न भाकामा गीत गाएर मज्जा लिन्थे । उनी लोक गायक गायिकाहरुसँग बसेरै गाउँथे र गाएको सुन्थे । जब दिपेन्द्र लोकगीत गाउन थाल्थे रोकिनै कठिन हुन्थ्यो । उनी भाका हा ली हा ली जोसका साथ गाउँथे ।पढाईमा […]
February 22, 2021 Nepal Correspondent102
काठमाडौँ, १० फागुन । विश्वका १ सय ३० राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई अहिलेसम्म एक डोज पनि खोप दिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा नेपाल भने निकै अगाडि देखिएको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये खोप अभियान सुरु गर्नेमा नेपाल पनि परेको छ । दक्षिण एसियामा अहिलेसम्म नेपालसहित बंगलादेश, भारत र श्रीलंकाले खोप अभियान सुरु […]
प्रोचुगल निवासी कल्पना भण्डारीको रचना,नारायण सुबेदी आभाषको मिठो संगीत र जगदीश समालको आवाजमा कर्णप्रीय गजल सार्बजनिक,दर्शकहरुको तारीफको ओइरो ।
January 22, 2021 January 23, 2021 Nepal Correspondent106
January 21, 2021 January 21, 2021 Nepal Correspondent85
काठमाडौं – अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद सुचारु गर्नका लागि आदेश दिन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि रिट निवेदकका तर्फबाट सुरुमै बहस गरेका अधिवक्ता अर्यालले संसद् सुचारु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमआदेश जारी गर्न माग गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको निर्णय राजपत्रमा समेत नआएकाले अझै पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले […]
January 18, 2021 January 18, 2021 Nepal Correspondent141
काठमाडौं, माघ ५ संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको बहसका क्रममा एक न्यायाधीशले अधिवक्तालाई समयको ख्याल गर्न सुझाव दिनु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट केवल दुई जनाले बहस गर्दा एक दिनको समय सकिएपछि न्यायाधीशले निर्वाचन भईसक्दा पनि बहस नसकिने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्दै सुझाव दिनुभएको हो । अधिवक्ताहरुको लामो बहस सुनेपछि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले समय […]
संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङको रेकर्ड भएको यो बोली सर्वोच्च पुगेपछि…
January 18, 2021 January 18, 2021 Nepal Correspondent153
काठमाडौं, ५ माघ । संविधानसभाबाट संविधान २०७२ सालमा जारी हुँदा अध्यक्ष थिए सुवासचन्द्र नेम्वाङले । आफू अध्यक्ष भएको संविधानसभाले संविधान जारी गरेको जस लिदै उनले दुनियाँको उत्कृष्ट मध्येको संविधान भनेका थिए । यसको विशेषताबारे पनि बेला बेलामा बोल्थे । यो संविधानको विशेषताबारे बोल्दा उनले विगतमा अस्थिरतालाई पूर्णविराम लगाउने गरी बनाइएको उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले […]
January 18, 2021 January 18, 2021 Nepal Correspondent160
काठमाडौं । ठेक्का हत्याएर तोकिएकै समयमा रासायनिक मल नल्याउने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारबाही नगर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेको खुलेको छ । मल नल्याउने ठेकदारविरुद्ध आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएका तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि ठेकदार जोगाउन मन्त्रालय लागेको पाइएको हो । ‘पुस १४ गते मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले […]